TOP 5 in Dijon: Standing Suite / Cathedral buka - I-Airbnb
TOP 5 in Dijon: Standing Suite / Cathedral buka
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Virginie
Ngo-206 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Virginie Ungumbungazi ovelele
24/7 UKUFIKA NGOKUZENZAKALELAYO
UKUKHANSELA KWAMAHHALA kufika ezinsukwini ezi-5 ngaphambi kokufika
2-5 MIN on foot STATION, PLACE DARCY, TRAM, PALAIS DES DUCS, TOWN-HISTORIC CENTRE
Indawo emaphakathi kakhulu yaleli fulethi labalingiswa be-chic nenhle. Ngombono omangalisayo weSaint-Bénigne Cathedral, le 40m2 suite isilungisiwe futhi yahlonyiswa ngokulingana okuphelele kokunethezeka nokucwengisiswa. Umsebenzi wokhuni, amatshe avele obala, usilika… I-Dijon ivezwa ngezinsuku zayo ezihamba phambili!
I-Indivio Suite iyikhaya lethu lesibili futhi kuyinjabulo enkulu ukuthi sikuvulele iminyango isikhathi esiningi sonyaka.
I-Perfect pied-à-terre yokuhlola inhliziyo yomlando ye-Dijon, leli fulethi elikhanya kakhulu likunikeza umbono ohlukile we-Dijon Cathedral. Itholakala esitezi sokuqala sebhilidi elijwayelekile lase-Dijon, lifakwe ngokuphelele, lahlotshiswa futhi lahlonyiselwa ukunethezeka kwakho. Ifulethi lifakwe i-WIFI.
Ikamelo eyinhloko efulethini yakhiwa emihlabeni emibili: i-zinakho ekhishini evulekile (hob kagesi, kuhhavini futhi-microwave, isiqandisi, efrijini, Umshini wokuwasha izitsha, Nespresso ikhofi machine, iketela, njll) nge itafula nezihlalo, kanye eziyisisekelo imikhiqizo ukuqedela imishini (ikhofi amaphilisi, itiye izikhwama, ushukela, usawoti, amafutha, ujamu ...) kanye ikamelo abaphila ne usofa convertible embhedeni, a Smart TV lapho ungakwazi ukufinyelela iziteshi kazwelonke kanye Netflix platform ukusakaza .
Ukuvuleka okubanzi okuhlukaniswe izicabha ezishelelayo kukunikeza ukufinyelela ekamelweni elibanzi kanye nekhwalithi yalo yokulala engu-160x200 cm (amashidi anikeziwe). Ikamelo lokulala livula igumbi lokugezela elinethezekile futhi linikeza igumbi lokugqoka, indishi yokuwasha enesibuko kanye neshawa enkulu. Amathawula ahlinzekwa kanye nejeli yokugeza. Izindlu zangasese zizimele ngaphandle kwendlu yokugezela futhi zihlanganisa umshini wokuwasha kanye negumbi layo elincane lokuhlanza.
I-wifi esheshayo – 206 Mbps
Isifunda saseSaint-Bénigne Cathedral kanye nePlace Darcy bekuyindawo ebalulekile yempilo yasemadolobheni neyokuvakasha eDijon amashumi eminyaka amaningi. Iletha ndawonye eziningi izakhiwo Haussmann-isitayela, lo odumile Porte Guillaume okuyinto Dijon lokho lwaleli lokunqoba iwukuba Paris, izikhungo eziningi enezinkanyezi Culinary, Benedictine ehostela (manje i-Museum bemivubukulo) okuyinto adjoins le buttresses lombhishobhi ngokubabazekayo Saint-Bénigne . Futhi ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka kuzo zonke izitolo, iSigodlo samaDukes aseBurgundy kanye neFine Arts Museum evuselelwe kabusha.
Bathandi bedolobha lase-Dijon, sizokunikeza lonke ulwazi oludingayo ukuze uqinisekise ukuthi ukuhlala kwakho enhloko-dolobha ye-Dukes of Burgundy kuhlangabezana nokulindelweyo. Sizokujabulela ukuphendula imibuzo yakho nge-imeyili noma nge-sms futhi sizozivumelanisa neziphakamiso zethu ngokwezidingo zakho. Uzothola izincwajana eziningi zezivakashi esizeni kanye nencwadi yamakheli ethu angcono kakhulu e-Dijon. Sikhuluma isiFulentshi nesiNgisi.
Ukufinyelela ku-La Suite Indivio kuzimele, zonke izincazelo uzonikezwa zona ngemva kokubhukha kwakho.
Bathandi bedolobha lase-Dijon, sizokunikeza lonke ulwazi oludingayo ukuze uqinisekise ukuthi ukuhlala kwakho enhloko-dolobha ye-Dukes of Burgundy kuhlangabezana nokulindelweyo. Siz…
UVirginie Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 853391340
Hlola ezinye izinketho ezise- Dijon namaphethelo